‘Waxa Laygu Eedeeyey Inaan Gabadha Tababaraha La Seexday’ – Zaha Oo Si Murugo Leh Uga Sheekeeyey Qisooyinkiisii Manchester United | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
‘Waxa Laygu Eedeeyey Inaan Gabadha Tababaraha La Seexday’ – Zaha Oo Si Murugo Leh Uga Sheekeeyey Qisooyinkiisii Manchester United
Published on September 21, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(22-9-2018) Xidigii hore ee kooxda Manchester United ee Wilfried Zaha oo hadda ka tirsan kooxda Crystal Palace isla markaana ka mid ah xidiga ugu bandhiga fiican ayaa waraysi xaasaasi ah bixiyay wuxuuna kaga hadlay waqtigiisii Manchester United.
Wilfried Zaha ayaa dhawaan cadho wayn ka muujiyay garsoorka horyaalka Premier league wuxuuna ku dooday in kaadhadh digniin ah lagu siiyay in uu istuuray xili uu qaladaad xoogan la kulmay isaga oo waliba sheega in garsoorku ay rekoodhe u dhigi karaan marka lugaha laga jabiyo oo kaliya.
Wilfried Zaha ayaa ka hadlay arin xaasaasi ah oo warbaahinta lagu daabacay markii uu Manchester United ka baxay taas oo ahayd in uu la seexday inan ama gabadh uu dhalay tababarihii Manchester United ee David Moyes.
Wilfried Zaha oo ka hadlaya waqtigiisii Manchester United ayaa yidhi: “Xaqiiqdii soo galista United wax sahlan ma aha, sidaa daraadeed, in fursad lagu siiyo oo aanad qaadan waa wax adag, wax aad u badan ayaan la soo maray Uited iyo England”.
Intaa kadib Wilfried Zaha ayaa ka hadlay arin muran badan dhalisay oo hore loogu sheegay sababtii dhabta ahayd ee uu Old Trafford kaga baxay wuxuuna yidhi: “Waxaa jiray warar xan ah oo ah sababtii aanan ugu ciyaarin United, sababtoo ah in aan la seexday inanta ama gabadha David Moyes, manuu jirin hal qof oo isku dayay in uu kala cadeeyo”.
Wilfried Zaha oo si layaableh uga hadlay noloshii adkayd ee ku soo martay Manchester United iyo saamaynta ay ku yeelatay ayaa yidhi: “Iyagu gaadhi imaysiin aniga sida ay ciyaartoy kasta oo kale u sameeyeen, naftayda ayaan cadaabta kula noola oo aan qoyskayga ka maqnaa waxaanan ka fikray: ‘Haddii ayna tani iga dhigan mid ka sii xoogan maxay iga dhigi lahayd”.
Wilfried Zaha oo xaaladiisii United ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Markii aan United joogay lacag ayaan haystay, laakiin walal badan ayaan dhulka u aalay, waxay dadku u maleeyaan in nolosaadu ka duwan tahay sababtoo ah in aad lacag heshay, caan ayaad noqonaysaa, sidaa daraadeed si la mid ah kuulama dhaqmayaan, anigu waxba kama qoomamaynayo, sababtoo ah way i sii xoojisay, waxaan dareemay in aan wax walba la tacaali karo”.
Jamaahiirta kubbada cagta aduunka ayaa fikiro badan oo kala duwan ka bixiyay hadalada uu Wilfried Zaha kaga hadlay waqtigiisii Manchester United iyaga oo qaar taageero u muujiyay halka kuwo kale ay dhaliil u soo jeediyeen.